Dararaa Yaman: Daa'imman 85,000 sababa 'hanqina nyaata madaalawaan du'aniiru' - BBC News Afaan Oromoo
Dararaa Yaman: Daa'imman 85,000 sababa 'hanqina nyaata madaalawaan du'aniiru'
Image copyright Mohammed Awadh/Save the Children
Goodayyaa suuraa Daa'ima baatii 13
Daa'imman umurii shanii gadii 85,000 tti tilmaamaman sababa hanqina nyaata madaalawaan waraanaa Yaman hunkuruu erga eegalee waggoota sadii darban keessatti du'aniiru jedha gabaasni dhaabbata gargaarsaa tokko.
Akka gabaasa 'save the children'tti lakkoofsi kun daa'imman umurii shanii gadii magaalaa UK guddinaan lammaffaa taate Barmiingihaam keessa jiraatan waliin wal qixa.
Daa'imman Yaman miil 5 beelaaf saaxilaman
Waantoota dubartoonni Sa'uudii ammallee dhorkaman
Dhaabbaatichi waraanaa waggoota sadii keessatti rakkoo namoomaa hamaa adunyaa kanaa uume furuu mariin araaraa danda'u akka eegalamu tattaafachaan jiras jedha.
Bara 2015 kaasee waraana Yaman Saawudii fi deeggartootni ishee warra Ha'uutii kan pireezidant Abdurabbuh Mansuur Hadii aangoorraa buusan irratti haleellaa bananiin darara hammaateen namoonni nagaan 6,8000 lubbuu ajjeefamaniiru, 10,700 kan ta'an ammoo madaahaniiru jedha gabaasni dhaabbata biyyoota gamtoomanii.
lolli Yaman gaaga'ama hedduu fide
Waraannii fi cufamuun gariin cufamuun ulaalee gargaarsi itti kennamuu namoota miiliyoona 22 fedha gargaarsa namoomaaf saaxileera. Kuniis balaa hamaa deeggrsa atattamaa addunyaatti isa guddaadha jedhame uumeera, dhibeen koleera bifa weeraraan ka'eesnamoota miiliyoona 1.2 balaa hamaaf saaxileera.
Daa'imman hanqina nyaata madaalawaaf saaxilaman kun maal ta'u?
'Save the children' akka jedhuutti qorannoolee Kanaan dura taasifaman irratti hundaa'uun rakkoon akkasii dafee fala yoo hin araganne daa'imman %20-30 ta'an waggaa waggaan ni du'u.
Daariketeerri 'save the children' dame Yaman Tameer Kiroloos akka dubbatutti daa'imman boombii fi dhukaasaan ajjeefamaniin alatti hedduun beelaan du'aa jiru kun guutummaatti waan ittisuun danda'amuudha.
Daa'imman kunniin kutaaleen qaama isaanii hojii isaanii haalaan hojjechuu dadhabanii yoo laafan, maatiin daa'imman isaaniif waa gochuu dadhabuun yoo isaan du'an callisanii ilaaluuf dirqamaniiru jedha Tameer.
Dabalataaniis lubbuun daa'imman 150,000 kan Hudaaydaah keessa jiraatan haleellaa qilleensaa turbanoota darban hammaateen balaa hamaaf saaxilamuus dubbata.
Waraana Yaaman: Humnooti Saawudiin deeggaraman buufata Hudaaydaa haleeluu jalqaban
Sa'uudi Arabiyaatti dubartoonni maal gochuu dhorkaman
Waraana Yaman: Daa'imman dabalataa miil tokko beelaaf saaxilaman
19 Fuulbana 2018
Viidiyoo Lola yamaniif sababoonni gurguddoon maali?
8 Muddee 2017
Koleeraan maali, attamiin namarraa namatti darba?
Biyyoonni hiyyeeyyii Afrikaa qorichaaf dachaa 30 kaffalu